Horta ninka wadaadnimada sheegta ee Berberaawi waa kuma? - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Horta ninka wadaadnimada sheegta ee Berberaawi waa kuma?
“Horta ninka wadaadnimada sheegta ee Berberaawi la yidhaahdo, ee dhallinyarada ku dhex faafiya figradaha qaldan ee ah ‘annaga wadaaddada ah wax na dhagaysta oo wax na ga akhrista, dadka kale oo dhamina waa cadowga Islaamka ee naca”, horta ninkaasi waa qolama?
Qofka soomaaliga ah ee aragti dhiibanaya xilligan waa in la gartaa qabiilkiisa, haddii kale Carab ama Yuhuudi Af Soomaaliga bartay oo hagardaamo kuu wada ayaa kaala murmaya danaha umaddaada (qaran aan qabiil la is ku aqoonsan Ilaahay ha ina gaadhsiiyo).
Barbaraawi berigii magaciisa iigu horreysay wax aan dhegaystay isaga oo masalo aan anigu aad u aqaan oo aan ka hadlay uu si jaahilnimo ah igu naqdiyay, oo uu masaajidkiisa iga soo caayayay.
Hortase ninkani wax kutub ah oo aan fikirkiisa ka ogaan karo ma leeyahay, mise waxiisu waa wadaad baan ahaydii gabowday oo masaajid uu dadka ka soo caayo u helay?
Waraysigan uu ka hadlay TV; ahna waraysi aan lahayn wariye xirfad leh oo mawduuca waydiintu ku jirto hagi kara, oo jawaabta aan qummanayn ama qabyada ah xujo gelin kara, oo masalo godlan lisi kara, warcelinta dhiciska ahna su’aal dhammays ah ka dhalin kara, waa tusaale kale oo ah tayo xumada warbaahinta. Bal ka warran warbaahin qofka ay waraysanayso u shaqaynaysa!..
Ma jirto warbaahintaasi, waayo tusaale ahaan waa ayo dadka uu Barbaraawi leeyahay aniga ayaa diinta ka xiga oo aan uga hiilinayaa?
Waa ayo dadka uu leeyahay “wax ay qoraan qoraallo macaan oo ay dadka akhriska jecel ku gaalaysiiyaan?
Ma isaga ayaa kuwa wax qora iyo kuwa wax akhriyaba ka caqli iyo iimaan badan, oo ay tahay in uu ka la ilaaliyo si aanay isu gaalayn?
Sow ma cadda in uu ka buko jacaylka aan soohdinta lahayn ee ay bulshada soomaalidu ku gashay akhriska afkeeda iyo guud ahaan aqoonta, ee kaga xorowday addoonsiga ay nooca Barbaraawi dadkooda la jeclaan lahaayeen in ay ku haystaan?
Waa kuwee dadka aan maskaxda lahayn ama qaangaadhka ahayn ee uu wax ugu sheegayo sida ciyaalkiisa? Isaga yaa doortay ee uu matalaa? Muxuu isagu isu arkaa? Ma doorrane? Yaa doortay?
Kolka uu lee yahay Af Soomaali macaan bay dadka ku gaalaysiiyaan oo waa dad xun, dabcan dadka uu weerarayo ee diinta ka xigsanayo aniga ayaa kow ka ah.
Bal haddaba ka warrama haddii aan saaka idin idhaahdo “Barbaraawi iyo noociisu waa gaal iyo gaalo raac, waxay idiin sheegayaanna waa baaddil ee aniga iyo saaxiibbaday oo qudha wax naga dhagsysta?
Waa dhuuniraacyo Diinta carab ka iibsada, oo ninka aad kabaha ka tolanayso illayn kabihiisa ayaa la eegaaye, bal car qof hal kitaab oo isaga aqoontiisa diineed ka yimid ha ku siiyo!
Markaa murankiisu waa Kitaabka Quraanka ee idinka dhexeeya, khilaafka idin dhex yimidna waa wax uu nin kale ka soo qaatay.
ARAABINEWS masuul kama ah fikradaha dadka nala wadaagaan waxayna khaas u yihiin qofka ku saxiixan.